I-Thilo Kehrer Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseGerman I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Vula". I-Thilo Kehrer Indaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokukwazi kwakhe ukudlala ukuvikela kuzo zonke izikhundla. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-Biography kaThilo Kehrer okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuqala Kwakuqala Nemikhaya Yomndeni
UTholo Kehrer wazalwa ngosuku lwe-21st lukaSepthemba 1996 eTubingen, eJalimane. Wazalwa nge-Half-caste kumama waseJalimane nomama waseBurundi owachitha ingxenye yokuphila kwabo e-Afrika.
UTholo Kehrer wakhula nodadewabo othandekayo uSara (Ex-Boyfriend of Serge Gnabry) e-Afrika, kuqala eBurundi ke eRwanda. Nakuba unina uqobo evela eBurundi futhi yena kanye nomyeni wakhe ubaba basebenza kuleli zwe iminyaka eminingi ngaphambi kokuba bahlangane futhi bashade. Ukukhulela kula mazwe angama-francophone kwanikeza izingane zabo ithuba lokukhuluma kahle ngesiFulentshi.
UTholo, owokuzalwa eTübingen unesibongo sakhe "Kehrer"Ukuba igama elingavamile laseJalimane ngokuvamile elibhekwa ngumuntu ohlala kulo ohlala ezintabeni zaseSwitzerland, eBavaria naseSaxony. Igama libonakala libhekisela "umuntu ohlala ngendophi emgwaqweni". EJalimane yanamuhla, igama elithi Kehrer lisho ukuthi "ukuhlanza".
Abazali bakaTholo Kehrer banquma ukukhulisa izingane zabo eMpumalanga Afrika ukuze bazijwayele izimpande zomndeni wabo. Kodwa-ke, ukuhlala kwabo kwakumfushane lapho umndeni ubuyela eTübingen, eJalimane ngaphambi kokugodla uMelinnium omusha (Unyaka we-2000).
Lapho bebuya, umndeni kaTholo Kehrer wawuhlala ePfäffingen, isifunda somasipala wase-Ammerbuch, entshonalanga yeTübingen. Ngesikhathi ehlala lapho, waya esikoleni samabanga aphansi lapho edlala khona imidlalo yezokuncintisana futhi waba nempumelelo yakhe yokuqala yezemidlalo.
"U-Thilo ngesikhathi sokufunda esikoleni esiphansi wabhekwa njengento esheshayo emisebenzini yezemidlalo. Wayenguye kuphela umntwana owayengakwazi ukugxuma kakhulu futhi agijime ngokushesha". Lolu lwazi luvezwe ngu-Armin Göhring indodana yakhe eya esikoleni esifanayo noThilo futhi owayehlala cishe ngamamitha angu-300 kude nomuzi wakhe osemncane ePfäffingen. Umbiko we-Tagblatt.
Ngenhlanhla, u-Armin wayenguMholi weMidlalo yeBhola e-Thilo. Wenza okungaphezu nje kokubonga umfana. Weluleka uTholo ngesidingo sokugxila kuphela emdlalweni webhola isikole samnika. Ngokushesha, ibhola liba yinto yokuzilibazisa evamile futhi ukuzimisela kwakhe ukuba ngumdlali webhola lezinyawo kuye kwaholela ekubhaliseni eqenjini lendawo.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi eshaywa yile millennium entsha, umsebenzi kaTholo Kehrer usanda kuqalwa. Uthando lwakhe lwebhola lumbonile ebhalisa ohlwini lweqembu lakhe lendawo yentsha, TSG Tübingen lapho eqeqeshe khona kakhulu umsebenzi wakhe omusha.
Iminyaka Yokuqala YaseThilo Kehrer e-TSG Tübingen. Isikweletu ku I-DFB
Kusukela ekuqaleni, uKeyrer wayebhekwa njengokwemvelo ngamamitha amabili. Wayengumuntu onomshini ongakwesokunxele nesokunene. Naphezu kokwaziswa, ukuqala okuhle kukaKehrer eklabhu kwakungakapheli isikhathi ngenxa yenkinga eyayikhathazekile ngabaphathi beqembu. Lesi yisikhathi lapho bekhala khona ukuthi wabonakala futhi baziphathe ngendlela efanayo nabalingani bakhe.
"UMTHETHO WESIKHATHI SIKHAKHAKHA AKWAKHONA UKUQALA",
kusho uWolfgang Poerschke, owayesebenza eqenjini lebhola lezinyawo futhi wayebhekene nokugcinwa kukaKehrer. Waqhubeka ...
"Kwase kuphele isikhathi esithile, wayesebenza kabi futhi waphoqeleka ukuba abaqeqeshi bangamqokothi. Ngokujabulisayo, uTholo waqaphela isignali futhi waphendula kahle kakhulu, ngemuva kwalokho waphindela ngesimo sengqondo esishintshile. "
Lapho eneminyaka eyi-10 ngonyaka ka-2006, uTholo Kehrer wathuthela ku-SSV Reutlingen, omunye umfundi wezemidlalo ngemuva kokusizwa ngumqeqeshi wendawo, u-Albert Röcker. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba umndeni wakhe uthuthele endaweni. UKehrer washeshe wavuka phakathi kweqembu. Umzuzu wakhe omuhle kakhulu yisikhathi lapho ehola inkampani yakhe yentsha ukuwina umncintiswano emncintiswaneni we talent.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Izinguquko ezinkulu ekuthuthukiseni kwentsha kaKehrer zenzeke lapho edluliselwa ku-VfB Stuttgart ngonyaka we-2009. I-gem yokuzivikela yayigxumeke ngekhanda neqembu elihambisana ne-maturit enamandla. Lokhu kubonakala ekukhethweni kwakhe ukuthi ukhethwe ukuba amele abalingani beqembu lakhe ekuxoxweni.
Isikweletu ku EnBW-Oberliga Junioren.
Ukuphakama Kwentsha Yenjabulo:
Ngemuva kweminyaka emibili ephumelelayo eVfB Stuttgart, impumelelo kaKehrer yazibona ithathwe nguSchalke 04 uhlelo lwezintsha, iqembu leJalimane elaziwa ngabantu abahamba phambili ekuthuthukiseni amakhono amasha.
Phakathi nezinsuku zakhe zokuqala zeSchalke, uKehrer osemncane uhlangana nomqeqeshi osemusha uNorbert Elgert obenomthwalo wokumenza abe ngumdlali webhola.
UNorbert Elgert- Le ndoda emva kweSchalke Talents. Isikweletu ku-AFP
Njengoba kubonwe esithombeni ngenhla, uNorbert Elgert akazange nje akhiphe iKeyrer. Wayenguye owakhuphula ezinye izinkanyezi ezinkulu ngokuphawulekayo okuthandwa ngu ULoyoy Sane, I-Mesut Ozil, Manuel Neur futhi UJulian Draxler.
UKehrer wahlala eSchalke iminyaka eyisele yobusheni bakhe okwenza inqubekela phambili eqhubekayo ngokusebenzisa uhlelo lweSchalke 04 II. Ukukhishwa kwakhe kwentsha yasondela lapho ebamba i-Schalke 04 U19 juniors (nabadlali abafana ULoyoy Sane) ukuze anqobe isihloko somqhudelwano kanye ne-Westfalen Cup.
UTholo Kehrer ugubha ukunqoba kweWestfalen Cup nabalingani beqembu. Isikweletu ku-Twitter.
Ngomsebenzi wakhe oqinile, waqinisekisa abaphathi beqembu futhi wavunyelwa ukuqeqesha nge- Schalke Ithimba eliphezulu.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
UTholo Kehrer kwakudingeka alinde isikhathi sakhe sokuqala uSchalke. Ukubekezela nokuzimisela kwaba yi-watchwords akhe phakathi nalesi sikhathi. Leli qembu leqembu lokuqala lafika, wavunyelwa eqenjini eliphakeme ngenxa yokuntuleka kwabaphikisi. I-Nastasic ne-Höwedes ayitholakali futhi uChehrer wenza i-debut yakhe eBundesliga.
U-Khrer wayengenalutho ekuzivikeleni futhi wahola ngisho neqembu lakhe laseDortmund likaTomot Tuchel emdlalweni omkhulu we-German derby (FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund).
Ithimba likaTholo Kehrer lizobizwa ngeFC Schalke 04. Isikweletu ku-Comunio Blog no-Zimbio
Ukulinganisa abaphikisana nabamelene nomhlaba ekhaya akutholakele kuphela abalandeli baseKehrer, kodwa futhi baphakamisa iphrofayli yakhe emehlweni UThomas Tuchel (Current PSG Boss njengesikhathi sokubhala). UKeyrer akazange amise lapho. Wabuye wanikela i-U-21 Euro ku-2017 njengomphathi.
U-Thilo Kehrer ukugubha u-U-21 Euro 2017 ukunqoba nabalingani beqembu. Isikweletu ku-Twitter.
Kuleli qembu, kuthiwa uhlolwe yizinkampani eziningi zaseYurophu eziphezulu. Phakathi kwabo kwakungu-PSG owaphethwe yi UThomas Tuchel uKehrer owathobisa iqembu lakhe langaphambili. Tuchel wenza konke angakwenza ukuze athole uTholo Kehrer, ukudluliselwa okwakubone ukuthi usebenzisa imali engu-37 million kanye nokudiliza irekhodi leBundesliga.
Thilo Kehrer Izimpawu ze-PSG. Isikweletu eParis Saint-Germain
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ngubani umngane kaThilo Kehrer? Isikweletu ku-Instagram.
Ngaphansi kwebhola lezinyawo eliphumelelayo, kukhona ngempela i-WAG ekhangayo. Nokho, i Izingoma ezifihlakeleyo zeT thilo Kehrer yizona eziphunyuka ekuhlolisweni kweso lomphakathi ngenxa yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo futhi mhlawumbe idrama-mahhala.
Njengesikhathi sokubhala, iKeyrer uzama ukugwema noma yikuphi ukukhanya empilweni yakhe yangasese. Ungase abe nobuhlobo futhi akhetha ukungenzi umphakathi okungenani okwamanje.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Thilo Kehrer Ukuphila Komuntu siqu. Isikweletu ku-Instagram
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaKehrer ngaphandle kwe-pitch kungakusiza uthole isithombe esiphelele kuye.
Ukuqala, uKherer uhlala phansi kakhulu emhlabeni kuze kube yilolu suku. Ungumuntu owazi izimpande zakhe. Futhi, indlela yakhe yokuphila eqinisekisa ukuthi akukho lutho olushiywe ngengozi. Njengoba kuboniswe ngamaqiniso akhe angenalutho ngezansi, uzobona ukuthi uTholo Kehrer umuntu onenhliziyo yesineke nomqondo ojulile wobuntu.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Naphezu kokuphila kwakhe kwasekuqaleni eBurundi naseRwanda, uTholo Kehrer uhlonipha wonke umzuzu wokuphila kwakhe ebuntwaneni owachitha ePfäffingen, eJalimane.
Thilo Kehrer Hometown. Isikweletu ku Umphakathi we-Ammerbuch
Ngesifo se-paparazzi njalo, umndeni kaKehrer ikakhulukazi abazali bakhe okwamanje balondoloza impilo yabo ngaphandle kweso lomphakathi ngaphandle kwemifanekiso yezithombe zabo kuwebhu. Nokho, lokhu akulona iqiniso udadewabo kaKehrer omhle uSara.
Iqiniso Elibaluleke Kakhulu NgoThilo Kehrer Family:
Igama elithi "Ama-WAGs"Okusho ukuthi abafazi namantombazane aphezulu-abadlali bebhola bephrofayili baye bathola isisindo ezikhathini zamuva. Ngenxa yobuhle bakhe obuhle, uSarah Kehrer uqale ukwenza igama elithi "Odadewabo" inohlonze impela.
UThilo Kehrer Ukuphila Komndeni: Udadewabo. Isikweletu ku I-Insta Stalker
USarah Kehrer ungumgqugquzeli waseJalimane nesisekelo se-hugh fan on Instagram ngenxa yokuqoqwa kwakhe okuphelele kwe-bikinis enhle. Phakathi nokuvakashelwa kwakhe enhloko-dolobha yaseFrance, wake wabonisa uthando lwakhe edolobheni ethi: "Paris, ngiyakuthanda".
Njengasesikhathini sokubhala, azikho izimpawu ze "Isoka"Ku-akhawunti yakhe ye-Instagram. Njengoba kushiwo ngaphambili, uSarah Kehrer wayekade ebudlelwane nomdlali webhola laseJalimane nomngani kumfowabo, Serge Gnabry ovela kokubili ovela eJalimane naseCote d'Ivoire.
Ku-2018, uSara waphela ubudlelwane bakhe futhi wasungula ukuhlukana kwabo no-Gnabry kusisho sezindaba; "Saqaphela ukuthi akukho ukuxhumana okwanele phakathi kwethu. "Ngokushesha ngemva kwalokho, wasusa zonke izithombe zakhe ku-Instagram yakhe.
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
U-Thilo Kehrer akayona uhlobo lomdlali webhola lezinyawo ophila ngendlela enhle kakhulu ebonakalayo ngezimoto eziningi ezithandeka kakhulu, indlu enhle, u-booze, i-swagger namantombazane amahle.
Ngenani lentengo yamanje yamanani ayi-35,00 Million Euro kanye nomholo omkhulu wamasonto onke ku-PSG, kungenzeka ukuba akwazi ukukhokhela noma yini. Nokho, hikhono lokubhekana nodumo lihambisana ngokuqondile namandla akhe endleleni aphethe ngayo ibhola. I-Kehrer ayinaso isikhathi samaholide amaningi futhi abizayo. Uphila ngendlela elula kakhulu njengoba kubonakala ngendlela yakhe yokuzilibazisa.
Thilo Kehrer LifeStyle Facts. Isikweletu ku-Twitter
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Ukhumbula Umndeni Womama Nomphakathi Wakhe:
UTholo Kehrer unikeza ithemba kubantwana base-Afrika- Credit to UnitedCharity.
UTholo Kehrer ungomunye wabantu abambalwa kakhulu be-African-European footballers ababuyisela ezweni labo lase-Afrika. I-star star yaseJalimane izinikezele ekubambeni okuhle eBurundi lapho ehlinzeka khona ukuxhasa inhlangano yokuthula nentuthuko "I-Kickoff ithemba". Ngokusekela kukaKehrer, bonke abantu abahluphekile emphakathini ezweni lakubo bakuthola ithemba ngokusebenzisa usizo lwezezimali nezokusiza iKehrer inikeza.
Uvele wadlala i-90 Amaminithi nge-Eye Yokuguqa:
Amazwi we-Thilo Kehrer Untold once adlalwa ngeso lokuvuvukala. Isikweletu ku Schalke04
Kusukela ekuphikisana noRobin Quaison phakathi nezinsuku zakhe zeSchalke, uTholo Kehrer wayegqoke iso elihlaza okwesibhakabhaka njengoba edlala ama-90 amanani ngokumelene ne-Mainz. Ukulimala akuzange kuvimbele umvikeli ukuba angenzi ukwenza ama-duels enhloko.
Umnikelo wokuThuthukiswa kokuBambisana:
Inkontileka kaThilo Kehrer inomthelela wokubambisana. Ngokusho kwemithetho ye-FIFA, lokhu kuyimali ye-5% esebenzayo lapho umdlali oqeqeshiwe edlulisela eqenjini kwelinye izwe. I-37 million million ukudluliselwa kwakhe yabona i-PSG ikhokhela ukubambisana kuwo wonke amakilabhu aseJalimane abambe iqhaza ekuqeqesheni nasekufundiseni ibhola.
U-Thilo Kehrer u-Sergio Ramos noT Thiago Silva babe ngabalandeli bakhe abahlonishwa kakhulu. Laba bebalandeli bebhola bebheke kakhulu lapho ekhula.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeTholo Kehrer ebuntwaneni kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
H.Geissbauer NgoJanuwari 6, 2020 E-6: 40 pm
U-Die Hilfsorganisation, u-Thilo waseBurundi ongafundile "i-Anstoss zur Hoffnung eV" EBurundi lapho kugaselwa khona i-CEPEB ("Coup d'Envoi pour l'espoir iBurundi")